सरकारले यसकारण लगायो पब्जी खेलमाथि प्रतिबन्ध ! के हुन्छ पब्जीमा ? — Chetana Online
२८ चैत, काठमाडौं । सरकारले बिहीबार पब्जी खेलमाथि प्रतिबन्धको घोषणा गरेपछि सामाजिक सञ्जाल तरंगित बनेको छ । पब्जीमा भुल्नेहरु सरकारको निर्णयबाट स्तब्ध बनेका छन् ।